ဂျပန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော် ၂ဝ၁၈ ကို ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေး မြို့ ကြီးများတွင် ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက် စတင်ကျ? - Yangon Media Group
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံရုံးနှင့် ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်းတို့ပူးပေါင်းပြုလုပ်သည့် ဂျပန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော် ၂ဝ၁၈ကို ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့ကြီးများတွင် ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်မှ စတင်ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဇန်နဝါရီ ၉ ရက် နေ့လယ်ပိုင်းက မြန်မာဒိဋ္ဌခန်းမတွင်ပြုလုပ်သည့် စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပွဲမှသိရသည်။
ယင်းပွဲတော်ကို ရန်ကုန်တွင် ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်မှ ၂၈ ရက်အထိ နေပြည်တော်ရုပ်ရှင်ရုံနှင့် Junction City Theater2တွင် ပြသသွားမည်ဖြစ်ပြီး မန္တလေးတွင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက်မှ ၄ ရက်အထိ ဝင်းလိုက်ရုပ်ရှင်ရုံတို့တွင် ပြသသွားမည် ဖြစ် ကြောင်း၊ ဇာတ်ကားများကိုလည်း ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ရိုက်ကူးထားသော ဂျပန်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသစ် ၁၆ ကားကို အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ နှစ်ဘာသာစာတန်းထိုးပြသမည်ဖြစ်သည်။ ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ General Director Koji Sato က ”ကျွန်တော်တို့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ၁၆ ကားကို ရုပ်ရှင်ရုံသုံးရုံမှာ အချိန်သုံးချိန်ခွဲပြီးတော့ အခမဲ့ပြသသွားမယ်။ မည်သူမဆို အခမဲ့လာရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
ဂျပန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကို ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာမှတစ်ဆင့် နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးကို ပိုမိုတိုးပွားလာနိုင်စေပြီး ယဉ်ကျေးမှု အနုပညာများမှရုပ်ရှင်မှာ ပိုမိုကောင်းမွန်သောယဉ်ကျေးမှုများ ကိုပြသနိုင်ပြီး ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုရိုးရာဓလေ့များကို မြန်မာလူမျိုးများ ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။ ဂျပန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော် ကြည့်ရှုလိုသူများအနေဖြင့် အခမဲ့ကြည့် ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင်မပြသမီ တစ်နာရီအလိုတွင် သက်ဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ရုံ၌ ထုတ်ယူကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ကာ တစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ် ပြသသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ယခုနှစ်တွင် ဂျပန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်၌ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
လွင်မိုး၊ လူမင်း၊ နေတိုး၊ ပြေတီဦး၊ စိုးမြတ်သူဇာနှင့် အနုပညာရှင်များစွာ ပါဝင်မည့် 'လူကြီးလ?
မလေးရှာ ပက်ထရိုနာ့စ်ရေနံရုံး Twin Tower အဆောက်အအုံကို ပုံစံထုတ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရာတွင် ကူညီခဲ့သူ အာဂျင်တီးနား ဗိသုကာပညာရှင် ဆီဇာပယ်လီ (၉၂)နှစ် ကွယ်လွန်
ရိခေါဒါရ်မြို့ရှိ မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ်ဂိတ်၌ တရားမဝင်ဆေးဝါးမျိုးစုံ ဖမ်းဆီးရမိ
ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံတွင် အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲများ ငြိမ်းချမ်းစွာပြုလုပ်